पुलकै दुर्दशा बनाउने ठेकेदारहरूलाई कारबाही होइन, रेलमार्ग बनाउने जिम्मेवारी ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more पुलकै दुर्दशा बनाउने ठेकेदारहरूलाई कारबाही होइन, रेलमार्ग बनाउने जिम्मेवारी ?
पुलकै दुर्दशा बनाउने ठेकेदारहरूलाई कारबाही होइन, रेलमार्ग बनाउने जिम्मेवारी ?
भदौ १७ गते, २०७७ - ०६:४३
झापा । सार्वजनिक खरिद नियमावलीले ‘साइट क्लियर’ नभएसम्म ठेक्का लगाउन निषेध गरे पनि सरकारले इनरुवा–काँकडभिट्टा रेलमार्गमा माटो बिछ्याउन ठेक्का लगाउन हतार गरिरहेको छ ।
आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ – सार्वजनिक खरिद कानुनलाई तिलाञ्जली दिएर सरकारबाट ३३ अर्बको ठेक्का पाउन मिलेमतो गरिसकेका ‘भाग्यमानी’ तिनै ठेकेदार हुन् जसले पुल, सडक र सिँचाइको परियोजना अलपत्र पारेका छन् ।
इनरुवाबाट झापाको काँकडभिट्टा जाने रेलको ठेक्का पाउने मिलेमतो गरिसकेका रवि सिंहको कम्पनीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गृहजिल्ला झापाको कन्काई नदीको पुल १० वर्षदेखि अलपत्र पारेको छ । चार वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी ०६८ जेठमा सिंहको महादेव खिम्ती र पप्पु कन्स्ट्रक्सनले ३४ करोडमा ठेक्का लिएका थिए ।
तर, एक दशकसम्म पुलको प्रगति ४९ प्रतिशत मात्रै छ । देशको दुर्भाग्य ! सात सय २४ मिटर लम्बाइको पुल समयमा बनाउन नसकेर अलपत्र पारेको सिंहकै कम्पनीले अर्को कम्पनी मैनाचुलीसँग मिलेर सरकारकै हस्तक्षेपमा इनरुवा–काँकडभिट्टा रेलमार्ग निर्माणमा पनि दुई अर्ब १० करोडको ठेक्का पाउँदै छ । रवि सिंह अहिले नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष छन् ।
सिंहसँग सहकार्य गरिरहेको पप्पु कन्स्ट्रक्सनले देशभरि दर्जनौं आयोजना अलपत्र पारेपछि सरकारले कालोसूचीमा राखेको छ । त्यसैले गत वर्षदेखि महादेव खिम्तीले मात्रै काम गरिरहेको छ । तर, सिंहले पनि मदन अधिकारीको मैनाचुली निर्माण सेवालाई पेटी ठेक्का दिएको हुलाकी सडकका इन्जिनियर नन्दकुमार गुप्ताले बताए ।
सिंहसँगै उनले पनि रेलमार्ग निर्माणमा एक अर्बभन्दा माथिको ठेक्का पाउने मिलेमतो भइसकेको छ । ठेक्का लिने र अलपत्र पार्नेमा उनी चर्चित छन् । उनकी पत्नी गीता अधिकारी दमक नगरपालिकाको उपमेयर छिन् ।
रवि सिंहको कम्पनीले रौतहटमा अलपत्र छाडेको लालबकैया नदी नियन्त्रण आयोजना
सिंहको कम्पनीले कन्काई मात्रै होइन, रौतहटको लालबकैया नदी नियन्त्रण आयोजना, खोटाङको सडक निर्माण र सर्लाहीमा तटबन्ध निर्माण कार्य पनि अलपत्र पारेको छ । रौतहटको देवाही गोनाही नगरपालिकाको करुनियामा १६ वटा स्पर ०७२ जेठभित्र निर्माण गर्ने गरी उनले तीन करोड ६८ लाखमा लालबकैया आयोजना ठेक्का लिएका थिए ।
तर, थप चार वर्ष बित्दा पनि आयोजना अझै पूरा भएको छैन । पटक–पटक ठेक्काको समय थप गर्दा पनि निर्माण सम्पन्न भएन, बरु रुग्ण ठेक्काको परिचय बनाएको छ । स्पर निर्माण नहुँदा हरेक वर्ष गाउँ बाढीको चपेटामा पर्ने गरेको स्थानीय शेख फुलबाबुले बताए ।
तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी शर्माले ०७२ पुसमा ज्वाइन्ट भेन्चरमा २४ करोड ५२ लाख ६१ हजारमा ठेक्का लिएका थिए । उनीसँग डडेल्धुराको परशुराम नगरपालिका मेयर भीम साउदको निर्माण कम्पनीले साझेदारी गरिरहेको छ ।
तर, साढे चार वर्ष बित्दा पुलको भौतिक प्रगति ५५ प्रतिशत मात्र छ । अहिलेसम्म चारवटा पिलर मात्रै निर्माण गरिएका छन् । प्राविधिक समस्या देखाएर निर्माण कम्पनीले दुई वर्षदेखि पुलको काम नै गरेको छैन ।
सडक डिभिजन कार्यालय कञ्चनपुरका सूचना अधिकारी इन्जिनियर लक्षणदत्त जोशीले चार पिलर निर्माण गरिए पनि बाँकी दुई पिलरमा समस्या देखिएको बताए । ‘पिलर निर्माण गर्दा जमिनमुनि पानीको समस्या देखियो,’ उनले भने, ‘सोयल टेस्टका लागि विभागमा पठाएका छौँ ।’
विभागले ती ठाउँमा पिलर बनाउन नमिल्ने राय दिए कि त पुल बांगो बनाउनुपर्ने, कि पुनः प्राविधिक अध्ययन गरेर शून्यबाट सुरु गर्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् । उनका अनुसार ०७५ पुसमा म्याद सकिएपछि ठेक्काको समयावधि एक वर्ष थप गरिएको थियो ।
लुम्बिनी कन्स्ट्रक्सनले अलपत्र पारेको पुल : तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी ०७२ मा ठेक्का लागेको कञ्चनपुरको दोदा नदीको पुलको पाँच वर्षमा ५०५ मात्रै प्रगति
पूर्ण डिजाइन विना नै सडक डिभिजनले हचुवाका भरमा ठेक्का दिएर समस्या भएको स्थानीयको आरोप छ । स्थानीय जनकराज जोशीले पुल निर्माणमा ढिलाइ हुनुमा सडक डिभिजन र ठेकेदार कम्पनी दुवै दोषी भएको बताए । ‘पुल निर्माण गर्नुपर्ने स्थानको पहिल्यै प्राविधिक अध्ययन गर्नुपर्ने थियो, गरिएन,’ उनले भने, ‘सुरुमै त्रुटि गर्दा अहिले यो परिणाम आयो ।’
स्थानीयले पुल निर्माणका लागि पटक–पटक सडक डिभिजन कार्यालय कञ्चनपुरमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । ‘म्यादभित्रै काम सम्पन्न गर्नका लागि हामीले सम्बन्धित पक्षलाई घचघच्यायौँ, तैपनि सुन्दैनन्,’ स्थानीय अर्जुन साउदले भने, ‘सबैतिर कमिसनको खेलले पुल अलपत्र परेजस्तो लाग्छ ।’
सरकारी निकाय र जनप्रतिनिधिको गैरजिम्मेवारीपनका कारण काम नगर्ने ठेकेदारमाथि कारबाही गर्न नसक्दा पुल अधुरै रहेको उनको आरोप छ । ‘ठेकेदारहरूले ठाउँ–ठाउँमा ठेक्का लिने, पेस्की लिने, तर लगानी र स्रोत–साधन नलगाउने गरेका कारण पनि दोदामा समयमै बन्नुपर्ने पुल बनेन,’ उनले भने ।
पुल निर्माण नहुँदा सर्वसाधारण भने ज्यान जोखिममा राख्दै ट्युबमा शुल्क तिरेर आवतजावत गर्न बाध्य छन् । ‘हिउँदमा पनि पानी हुन्छ, नदी तर्न सकिँदैन,’ लालझाडी गाउँपालिका–४ देखतभुलीका सुन्दर रानाले भने, ‘बर्खामा झनै समस्या हुन्छ, ज्यान जोखिममा राखेर हिँड्नुपर्छ ।’
शंकरपुरका स्थानीय अगुवा अमरसिंह रानाले पुल अभावमा बिरामीलाई राति उपचार गर्न पनि लैजान नपाइने बताए । ‘नदीमा दिउँसो मात्रै ट्युबले तराउँछन्, राति कोही बिरामी भयो भने घरमै मर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने ।
हिउँदमा इटाह बाबा मन्दिर समितिले काठेपुल निर्माण गर्दै नागरिकलाई सुविधा दिँदै आएको छ । वर्षात्मा स्थानीय युवाहरू रामबहादुर राना, नरेश राना, जितबहादुर राना र रामु राना मिलेर १४ हजार लागतमा चार ट्युबको परम्परागत डुंगा बनाएर चलाउँछन् ।
उनीहरूले एक व्यक्तिको २० रुपैयाँ, साइकलसहित ५०, मोटरसाइलकसहितको दुई सय रुपैयाँ लिएर तराउने गरेका छन् । ‘हाम्रो उद्देश्य पैसा कमाउने होइन, बर्खामा नदी तर्दा कोही मर्नु नपरोस् भनेर चलाएका हौँ,’ रामबहादुरले भने ।
रमेश शर्माको शर्मा एन्ड कम्पनीले पनि कञ्चनपुरको दोदा नदीमै अर्को पुल अलपत्र पारेको छ । तीन वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी उनले ०७२ मंसिरमा २६ करोड ७१ लाख ८८ हजारमा ज्वाइन्ट भेन्चरमा ठेक्का लिएका थिए । तर, अहिलेसम्म ६० प्रतिशत काम मात्रै भएको छ । ०७५ मा म्याद सकिएपछि एक वर्ष थपेर ०७६ मंसिरसम्म पुर्‍याइएको थियो । तैपनि अपेक्षित प्रगति भएको छैन ।
पूर्वदेखि पश्चिमसम्म ठेकेदार कम्पनीको लापरबाही, अलपत्र छन् पुल, भत्किँदै छन् नहर
ठेकेदार कम्पनीले काम गरेको भए स्थानीय बासिन्दा असार ०७३ देखि नै कालोपत्रे सडकमा हुइँकिन पाउँथे । एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी असार ०७२ मा ठेक्का लागेको थियो ।
तर, हालसम्म ३० प्रतिशत मात्र काम भएको छ । अर्थात्, कालोपत्रे गर्नुपर्ने सडकमा ग्राभेल बिछ्याएर छाडिएको छ । त्यो पनि अब काम नलाग्ने बनेको छ । सञ्जय गुप्ता सञ्चालक रहेको रोशन कन्स्ट्रक्सनले ४ करोड ८९ लाख रुपैयाँ लागतमा उक्त सडक कालोपत्रे गर्ने ठेक्का लिएको थियो ।
०३८ मै खन्न थालिएको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको नहर निर्माण भारतीय पक्षको अवरोधका कारण लामो समय अलपत्र पर्‍यो । ०६२ मा पुनः नहर निर्माण सुरु भयो । माघ ०७० भित्र १२ अर्ब ७० करोड लागतमा निर्माण सक्ने लक्ष्य थियो ।
आयोजनाको पश्चिमी मूल नहर निर्माणको ठेक्का कालिका कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ, जसका मुख्य सञ्चालक राप्रपा नेता तथा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डे हुन् । उनीमाथि राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा गुणस्तरहीन काम गरेर दुई अर्ब १३ करोड भ्रष्टाचार गरेका मुद्दा चलिरहेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विस्तृत छानबिन गरी २२ मंसिर ०७५ मा विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा पाण्डेलाई दुई वर्ष कैद सजाय माग गरिएको छ ।
मंसिर ०७६ सम्ममा आयोजनाको निर्माण ८० प्रतिशत मात्र पूरा भएको छ । त्यसका लागि १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको आयोजनाले जनाएको छ । नहरका लागि सरकारले बर्सेनि करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ छुट्याउँछ । आयोजनालाई चालू आर्थिक वर्ष ०७७–७८ मा पनि एक अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो ।
प्रतिसेकेन्ड ५० हजार लिटर बहाव क्षमता बताइएको पश्चिमी मूल नहरले परीक्षणकालमै प्रतिसेकेन्ड चार हजार लिटर पानीको दबाब थेग्न सकेन । सोहीकारण १४ असार ०७६ मा ढकेरीमा मूल नहर भत्कियो । दोस्रो पटक ७ साउन ०७५ मा ढकेरीको चंगाई खोलानजिकै मूल नहर फेरि भत्कियो । समस्या आएपछि डेढ वर्ष नहरमा पानी चलाइएन ।
गत मंसिर पहिलो सातादेखि एक हजार लिटर प्रतिसेकेन्ड पानी छाडेर नहर सञ्चालनमा ल्याइएको छ । ढकेरी क्षेत्रको ६ किलोमिटर नहर मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याइए पनि ठाउँ–ठाउँमा भत्किने गरेको आयोजना प्रमुख लोकबहादुर थापा बताउँछन् । भन्छन्, ‘घुलनशील माटो भएकाले पानी चुहिने समस्या छ ।’
विष्णु शर्माको लुम्बिनी कन्स्ट्रक्सनले अलपत्र पारेको पुल : १० वर्षअघि ३४ करोडमा ठेक्का भएको सिन्धुलीस्थित कमला नदीको पुलमा ५०५ मात्रै प्रगति ।
सिन्धुली दुधौली नगरपालिका हतपतेस्थित कमला नदीमा निर्माणाधीन पुलको उस्तै तीतो कथा छ । यो पुल राष्ट्रिय गौरवमा सूचीकृत धरान–चतरा–हेटौँडा सडकमा पर्छ । ३४ करोड आठ लाख लागतमा असार ०६८ मा सक्ने गरी पप्पु कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का पायो ।
तर, आठ वर्षसम्म पुल निर्माण गरेन । त्यसपछि ठेक्का रद्द गरेर सरकारले विष्णु शर्मा सञ्चालक रहेको लुम्बिनी कन्स्ट्रक्सनलाई ५ वैशाख ०७६ मा निर्माण अगाडि बढाउने जिम्मा दियो । माघ ०७७ सम्ममा निर्माण सक्नुपर्ने समयसीमा छ । तर, हालसम्म ५० प्रतिशत मात्र काम सकिएको कम्पनीका इन्जिनियर पुष्पेन्द्र यादव बताउँछन् ।
लकडाउनले गर्दा निर्माणमा ढिलाइ भएको यादवको भनाइ छ । १४ वटा स्पान रहेको पुलको हालसम्म आठवटाको स्ल्याप ढलान सकिएको छ । पप्पु कन्स्ट्रक्सनले गरेको गल्तीका लागि लुम्बिनी कन्स्ट्रक्सनले चार करोड रुपैयाँ जरिवाना तिरेको छ । पप्पुले तीनवटा स्पान ढलान सकेको थियो ।
पप्पुले बनाएका दुईवटा गडर (वाल) लुम्बिनीले भत्काउनुपरेको छ । पप्पुले भुक्तानी लिइसकेका काम लुम्बिनीले फेरि दोहोर्‍याएर गरेको छ । सुरुमा पप्पु–लुम्बिनी जेभीले पुल निर्माणको ठेक्का लिएको थियो । पछि फेरि पप्पुले आफैँ निर्माण गर्ने बतायो । पप्पुले अलपत्र पारेपछि फेरि लुम्बिनीको जिम्मामा आयो । विश्व बैंकको ३२ करोड अनुदानमा आव ०७२÷०७३ मै निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता थियो ।
रानीजमरामै पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डे सञ्चालक रहेको कालिका कन्स्ट्रक्सनले एक अर्ब ७१ करोड ७९ लाख रुपैयाँ लागतको अर्को ठेक्का लिएको छ । असार ०७५ मा सम्पन्न हुनुपर्ने काम ०७७ का पाँच महिना बित्न लाग्दा पनि ५० प्रतिशत मात्र सकिएको छ ।
देशभर दर्जनौं आयोजना अलपत्र पारेर राज्यको ढुकुटी दोहन गरेका ठेकेदारहरूलाई नै सरकारले इनरुवा–काँकडभिट्टा रेलवे ट्रयाक बेड निर्माणको जिम्मा लगाउने तयारी गरेको छ । सरकारसँगकै मिलेमतोमा ठेकेदारहरूले एक सय ६ किलोमिटर लामो रेलमार्गका ५४ प्याकेजहरू भागबन्डा गरिसकेका छन् ।
राप्रपा नेता तथा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सनलाई एक अर्ब ३७ करोड ४२ लाखको ठेक्का भाग परेको छ । जब कि, उनीमाथि राष्ट्रिय गौरबको सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा गुणस्तरहीन काम गरेर दुई अर्ब १३ करोड भ्रष्टाचार गरेको मुद्दा चलिरहेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विस्तृत छानबिन गरी २२ मंसिर ०७५ मा विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा पाण्डेलाई दुई वर्ष कैद सजायको माग समेत गरिएको छ ।
रमाइलो त के छ भने दुई महिनाअघि मात्रै प्रदेश १ सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले पाण्डेको कम्पनीलाई प्रदेश सरकारका ठेक्कामा भाग लिन रोक लगाएको छ । तर, संघीय सरकारले भने त्यही प्रदेशको ठूलो आयोजना निर्माणको जिम्मा दिने तयारी गरेको छ ।
‘अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा रहेका कारण प्रदेश १ सरकारले कालिका कन्स्ट्रक्सनलाई खरिद प्रक्रियामा सहभागी नगराउने भनेको छ,’ यस विषयका जानकार प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका एक अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘तर, केन्द्र सरकारले दिने ठेक्का उनले पनि पाउने पक्का भयो भन्ने सुनिन्छ ।’
कालोसूचीमा रहेको कम्पनीले तोकिएको अवधिसम्म ठेक्कामा भाग लिन नपाउने व्यवस्था खरिद कानुनमा छ । तर, रमण रेलमार्ग निर्माणमा भने योग्यता पुगेको कम्पनी हो । विभागले आह्वान गरेको टेन्डरको म्याद १३ र १६ साउनमा सकिएपछि रमणलाई पनि सहभागी गराउन २३ साउनसम्म म्याद थप गरेको स्रोतको दाबी छ ।
यद्यपि, विभागले तोकिएको समयमा प्रस्ताव बुझाउन नसक्ने छिटफुटका लागि म्याद थप गरिएको बताएको थियो । यसरी म्याद थपिएपछि रमण कन्स्ट्रसनले पनि एक अर्बभन्दा बढीको ठेक्का हात पार्न मिलेमतो भएको छ ।
भदौ १७ गते, २०७७ - ०६:४३ मा प्रकाशित